အင်းစိန်မြို့သစ်ဈေးအနီး ယနေ့မနက်ပိုင်း မီးလောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » အင်းစိန်မြို့သစ်ဈေးအနီး ယနေ့မနက်ပိုင်း မီးလောင်
အင်းစိန်မြို့သစ်ဈေးအနီး ယနေ့မနက်ပိုင်း မီးလောင်
Posted by manawphyulay on Sep 13, 2011 in Myanma News, News | 11 comments
ယနေ့ မနက်စောစော ၆ နာရီအကျော်တွင် အင်းစိန်မြို့သစ်ဈေးအနီး ဂ ရပ်ကွက်တွင် ၀ါယာမှ ရှော့ဖြစ်ပြီး မီးလောင်ကျွမ်းရာ မီးသတ်ကားများ လာရောက်ငြိမ်းသတ်ချိန်တွင် အိမ်ခြေ ၃ လုံး မီးထဲ ပါသွားသည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
၀ါယာကလဲ အဲဗားရှော့ခ် ဖြစ်တာဘဲလား..
မီးသတ်ကားတွေကလည်း မီးငြိမ်းတာတောင် လာနေကြတာ တော်တော်တော့ မရှိတဲ့အိမ်ဆိုရင်တော့ မီးသတ်ကားဖိုး အတော်ကုန်ကျမှာ မြင်ယောင်သေးတယ်… ဒီလောက်လာတာတောင် အိမ် သုံးလုံးပါသွားသေးတယ်။ အိမ်က အပေါ်ထပ်ကနေ မီးခိုးလုံးတွေ အလိမ့်လိုက်မြင်နေရတော့ ဟိုဘက်လမ်းမှာ မီးလောင်တယ်အောင်းမေ့လို့ အသည်းအသန်ဖြစ်သွားတယ်။
မနောရေ .. မီးငြိမ်းတာတောင် မီးသတ်ကားလာတာ … မီးကြွင်းမီးကျန်ကနေ လောင်စာနဲ့ ထပ်တွေ့လျှင် မီးလောင်မှူ တစ်ခါ ထပ်ဖြစ်ပွားနိုင်တာမို့ ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်မကျန် အောင် ငြိမ်းသက်ရပါတယ်တဲ့လေ…
မီးသတ်ကား လာတဲ့ အပေါ် ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုဘူးလို့လည်း … မီးသတ်ဦးစီးဌာနက ပြောပြထားပါတယ် … ။ ပိုက်ဆံပေးရတာ အမှန်ဆိုလျှင် ငွေပမာဏ နဲ့ ဘယ်သူ့ကိုပေးတာလဲ … မီးသတ်ယဉ်နံပါတ်ဘယ်လောက်ကိုပေးရတာလဲ တင်ပြပေးနိုင်လျှင် သတင်းထူးဖြစ်မှာပါ …. ။
http://myanmargazette.net/58518/arts-humanities/politician-musician-celebrity-interviews-profiles#comments မှာ မီးသတ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ခဏတာ မေးမြန်းခဲ့တာတွေ ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဦး ။
ဟုတ်လား။ လမ်းထဲမှာ မီးအကြီးအကျယ်လောင်တုန်းကတော့ တစ်စီးကို နှစ်သောင်းတဲ့ ပေးရတယ်ပြောတာပဲ။ ဘယ်လိုမျိုးပေးရတာလဲမပြောတတ်ဘူး။ ဒါဆိုရင် ပိုက်ဆံတောင်းရင်တော့ တိုင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ ဘယ်သူကို သွားတိုင်ရမှာလဲဟင်…
အင်း ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတော့ ကြားပြီး ပေးလိုက်တဲ့လူကို မသိလိုက်ပါလားနော် … ။ လူတွေ လူတွေ ပိုက်ဆံမရှိဘူး ညည်းနေကြပြီး တယ်လည်း လက်ဖွာကြပါလား … :mad: ဒါတောင် နှစ်သောင်းတဲ့ … ။ တစ်ချို့လူတွေဆီက ပါးစပ်သတင်းကြားတာ … မီးသတ်ကား တစ်စီး တစ်သိန်းတဲ့လေ … ။ ဘယ်သူပြောတာလဲ စပ်စုတော့.. သူလိုလို .. ဟိုလူလိုလို အင်း အဲ …တွေ ဖြစ်ကုန်ရော …. ။
အားပေးတယ် … တကယ်ပေးရတာ မှန်လျှင် ရေးစမ်းပါ … ဒါမှ လူကြီးတွေလည်း ပြန်ကြားရမှာ .. အမှောင်ထဲကနေ လက်သီးပုံးပြသလိုဖြစ်နေတော့ … (ထိထိရောက်ရောက် မပြောပြနိုင်တော့ … တကယ်ပေးရလျှင်တောင် မသမာသူတို့ကို အားပေးသလို) ဖြစ်နေတော့ပေါ့ … ။
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကိစ္စမျိုးဖြစ်လာခဲ့လျှင် ရန်ကုန်တိုင်း မီးသတ်ဦးဌာနကို တိုင်တမ်းလို့ ရပါတယ် … ။ ဖုန်းနံပါတ်ကတော့… Yellow Page ထဲမှာ ရှာလိုက်ပါနော် :D :D
အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး မီးမီးသော်ရေ … တကယ်တမ်း မီးမလောင်တာ အကောင်းဆုံးပါ… ဒါပေမဲ့ လူတွေက သိပ်ပေါ့ဆကြတယ်… နွေတောင်မရောက်သေးဘူး မီးလောင်သံတွေ ကြားကြားနေရတယ် .. လူခိုးလျှင်မကုန် …မီးခိုးလျှင် ကုန်ဆိုတဲ့စကားလည်း ရှိသားနဲ့ … တစ်အိမ်က ပေါ့ဆတာ အရေးမကြီးဘူး … နောက်အိမ်တွေပါ ဒုက္ခရောက်ရရှာတယ်လေ … ။
မီးလောင်လို့ ပေးရတယ်ဆိုတာမျိုးကြားနေရတာမို့ … ပေးတဲ့အခါ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိလေး ဖြစ်အောင် … သတိပေးနှိုးဆော်တာပါ …
ဟုတ်တယ်ညီမလေးရေ… လူတွေကလည်း လူတွေပဲ ဖြစ်မှသာ ပြူးတူးပြဲတဲဖြစ်ကြတာလေ။ ကိုယ့်တစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ဘူးလေ။ လူခိုးရင် ကိုယ့်အိမ်ပဲပါတာ မီးခိုးတော့ အကုန်ပြောင်ရောလေ… အကြောက်ဆုံးကတော့ အဲဒါပဲလေ။
Eeeeeeeeeee ဟုတ်တယ် ညီမလည်း အဲ့ဒါတော့ကြောက်တယ် . .. သူတို့မီးပေါ့ဆတာ အရေးမကြီးဘူး.. မဆီမဆိုင်လူတွေက အချောင် … လူတွေကလည်း အမှတ်ကိုမရှိဘူး .. မီးဘေးဆိုတာ လူညီလျှင် တားနိုင်ပါတယ်… ။
မီးဘေးရှောင် မလောင်ခင်တား ။ လောင်ရင်ပြာကျ မီးသတ်တွေကနောက်ကျ ။ အိမ်လဲဆုံးငွေလဲဆုံး မီးသတ်ဗိုလ်ကြီး တပြုံးပြုံး ။
ဟုတ်တယ်ဗျို့။မီးလောင်ပြီ ဆိုတာနဲ့ကျုပ်တော့ လျှိ့မီးလို့ဘဲထင်နေတယ်။ခများတို့သိတဲ့တိုင်းဘဲ မော်လမြိုင်ဈေးကြီးတို့၊ရတနာပုံဈေးတို့ကဘယ်သူ့လက်ချက်နဲ့လောင်တယ်ဆိုတာ။ပြောင်းခိုင်းရွှေ့ခိုင်းလို့မရရင် မီးလျှိ့တော့တာဘဲဗျို့။